रोमी १४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१४ विश्वास कमजोर भएको मानिसलाई स्वीकार गर तर उसको मनभित्र खेलिरहेका तर्कहरूबारे फैसला गर्नलाई त होइन। २ कुनै मानिसले सबै कुरा खानहुन्छ भनी विश्वास गर्छ तर विश्वास कमजोर हुनेले भने सागसब्जी खान्छ। ३ खानेले नखानेलाई तुच्छ नठानोस् न त नखानेले खानेलाई दोष लगाओस्, किनकि परमेश्वरले उसलाई पनि स्वीकार्नुभएको छ। ४ अर्काको घरको नोकरलाई दोष लगाउने तिमी को हौ? ऊ खडा हुने हो वा लड्ने, त्यो उसकै मालिकको हातमा छ। निस्सन्देह ऊ खडा हुनेछ, किनकि यहोवाले उसलाई खडा गराउन सक्नुहुन्छ। ५ एक जना मानिसले कुनै एक दिनलाई अर्को दिनभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छ तर अर्को मानिसले भने सबै दिनलाई बराबर ठान्छ। हरेक मानिस आफैले सोचविचार गरेर पूर्णतया विश्वस्त होस्। ६ जसले कुनै एक दिनलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छ, उसले यहोवाको निम्ति नै त्यसो गर्छ। त्यसैगरि जसले खान्छ, उसले यहोवाको निम्ति खान्छ, किनकि उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछ। अनि जसले खाँदैन उसले यहोवाको निम्ति खाँदैन र पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछ। ७ वास्तवमा हामीमध्ये कोही पनि आफ्नै लागि मात्र बाँच्दैनौं, न त कोही आफ्नै लागि मात्र मर्छ। ८ यदि हामी बाँच्छौं भने यहोवाको निम्ति बाँच्छौं अनि मर्छौं भने यहोवाकै निम्ति मर्छौं। त्यसकारण, चाहे हामी बाँचौं या मरौं, हामी यहोवाकै हौं। ९ ख्रीष्ट यसैकारणले मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो, ताकि मरेका अनि जिउँदा दुवैको उहाँ प्रभु हुनसकून्‌। १० तर तिमी किन आफ्नो भाइलाई दोष लगाउँछौ? अनि तिमी नि, तिमी किन आफ्नो भाइलाई तुच्छ ठान्छौ? किनकि हामी सबै जना परमेश्वरको न्यायआसनसामु खडा हुनेछौं। ११ जस्तो लेखिएको छ: “यहोवा भन्नुहुन्छ, ‘म जीवित छु भन्ने कुरा जत्तिको पक्का छ, मेरो अगाडि सबै मानिसले घुँडा टेक्नेछन्‌ र म नै परमेश्वर हुँ भनी खुलेआम स्वीकार्नेछन्‌ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै पक्का छ।’ ” १२ तसर्थ, हामी सबैले परमेश्वरलाई आ-आफ्नो लेखा दिनुपर्नेछ। १३ त्यसकारण, अब उप्रान्त हामी एक-अर्कालाई दोष नलगाऔं, बरु आफ्नो भाइसामु ठेस खाने ढुङ्गा वा ठक्कर खाएर लड्ने कारण नराख्ने निर्णय तिमीहरूले गर। १४ कुनै कुरा आफैमा अशुद्ध हुँदैन भनेर प्रभु येशूको चेला भएको नाताले मलाई थाह छ अनि मलाई त्यसमा विश्वस्त गराइएको छ। मानिसले कुनै कुरालाई अशुद्ध ठान्छ भने मात्र त्यो उसको निम्ति अशुद्ध हुन्छ। १५ यदि खानेकुराले गर्दा तिम्रो भाइ दुःखी भएको छ भने तिमी प्रेममा चलिरहेका हुँदैनौ। जुन भाइको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो, आफ्नो खानेकुराद्वारा तिमीले उसलाई नाश नगर। १६ तिमीहरूले गर्ने राम्रा कुराहरूको कसैले निन्दा गर्न नपाओस्। १७ किनकि परमेश्वरको राज्यको सरोकार खानु र पिउनुसित होइन तर पवित्र शक्तिमार्फत पाइने उहाँको न्यायोचित स्तर, शान्ति अनि खुसीसित छ। १८ जसले यसरी ख्रीष्टको दास बनेर उहाँको सेवा गर्छ, उसलाई परमेश्वरले स्वीकार्नुहुन्छ र उसले मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउँछ। १९ त्यसैले अब हामी आपसमा शान्ति कायम हुने अनि एक-अर्काको उत्थान हुने कुराहरूको पछि लागौं। २० खानेकुराको खातिर हामी परमेश्वरको कामलाई नबिगारौं। हो, सबै कुरा शुद्ध छन्‌ तर यदि खानेकुराले गर्दा अरूलाई ठक्कर पुग्छ भनेर थाह हुँदाहुँदै पनि कसैले खान्छ भने त्यो हानिकारक हुन्छ। २१ तिमीले मासु खाँदा, मद्य पिउँदा वा अरू केही गर्दा तिम्रो भाइलाई ठक्कर पुग्छ भने त्यसो नगर्नु नै बेस हो। २२ तिमी जे विश्वास गर्छौ, त्यो तिमी र परमेश्वरबीचको मामिला होस्। आनन्दित हो त्यो मानिस, जसले पछि आफैलाई दोषी ठहराउने कुनै काम नगर्ने निर्णय गर्छ। २३ तर यदि शङ्का हुँदाहुँदै पनि उसले खान्छ भने ऊ दोषी ठहरिसकेको हुन्छ, किनकि आफूले जे विश्वास गरेको छ, त्यसबमोजिम उसले खाएन। निस्सन्देह, विनाविश्वास गरिने हरेक कुरा पाप हो।